Sekubulawe elinye futhi iphoyisa eGingindlovu | News24
Sekubulawe elinye futhi iphoyisa eGingindlovu
KUBULAWE iphoyisa elilodwa kwathi elinye lalimala kanzima kulandela impi yezulu lezandla ngaseGingindlovu, ngoMsombuluko.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uMajor Thulani Zwane usiqinisekisile lessigameko.
Uthe: “Ngo-9am, ngoMsombuluko, amaphoyisa amabili aseGingindlovu abone amadoda amabili ehamba nge-Toyota Auris emhlophe emgwaqeni u-R102. Athe esemisa imoto, aqala avulela ngenhlamvu ebhekise emaphoyiseni,” kusho uMajor Zwane.
Uqhube wathi kushone u-Warrant Officer oneminyaka engu-51 kanti elinye iphoyisa liphuthunyiswe esibhedlela.
UMajor Zwane uthe abasolwa babalekile futhi akukaboshwa muntu. Uthe: “Imoto ababaleke ngayo abasolwa itholakala maduzane nalapho okwenzeke khona lesi sigameko. Kuvulwe icala lokubulala nokuzama ukubulala emaphoyiseni aseGingindlovu,” kusho uMajor Zwane. Ekhuluma neNews24, okhulumela i-IPSS uMnuz Paul Herbst uthe abezimo eziphuthumayo banikeze leli phoyisa usizo lwezempilo.
Uqhube wathi leli phoyisa elilimele libangwa nezibi njengoba lidutshulwe amahlandla amahlanu.
UKhomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal, u-Lieutenant General Mmamonnye Ngobeni uthe ukubulawa kwelinye iphoyisa esifundazweni kuyamuthusa kakhulu.
Uthe: “Sikhathazekile ngokubulawa kwamaphoyisa, sinxusa amalungu omphakathi ukuthi angasivumeli lesi simo ukuthi siqhubeke. Zinsuku zonke amaphoyisa ethu abhekana nesimo sokuthi kungenzeka abulawe enza umsebenzi wokuvikela umphakathi,” kusho u-Lt General Ngobeni.
Uqhube wathi amaphoyisa azosebenza kanzima ukuqikelela ukuthi abasolwa bayaboshwa.
U-Lt General Ngobeni udlulise amazwi enduduzo emndeni wephoyisa elishone kulesi sigameko.